Kanjani ukuqala nendlela ukukhubaza PvP esifundeni "Maynkraft"?
Uma udlala "Maykraft" kwimodi single-player ke izitha zakho kukhona nezixuku, ahlekwe ukuthi futhi silwele ukukubulala, aphange impahla yakho. Okunye okusongela kuwe, empeleni, cha, kodwa konke eshintsha lapho unquma ukuthi ushintshele kumodi multi-umsebenzisi. Phela, kukhona angaphezu kwelilodwa umdlali emhlabeni efanayo. usongo izixuku ingabe usekhona, kodwa kukhona ingozi entsha - abanye abasebenzisi. Abakwazi ukuhlasela wena ukubulala ngisho noma ungeke bazivikele. Abanye abalandeli uncamela PvP kuhlasela ababuthakathaka, angakawamukeli kwenziwe imishini eyanele futhi izikhali. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukukhubaza PvP esifundeni "Maynkraft", ngoba ngempela kungasindisa wena engozini.
abadlali abaningi abangekho ujwayelene imidlalo yabadlali abaningi, ngakho kungaba ngisho engaziwa PvP eside. Ngenxa bangaqondi ukuthi kungani ukwazi ukuthi ukukhubaza PvP esifundeni "Maynkraft". Ngakho kuyafaneleka sihlolisise lo mqondo nendlela kungase kuthinte umdlali. Ngakho, kukhona kokulotshiwe okuphelele PvP, ezingasetshenziswa ngokushesha ezisikhanyisela essence yayo. Player vs. Player - yilokho kusho sifushane, ngakho kule modi kusho ukuthi umsebenzisi ngeke bhekana izixuku futhi nabanye abadlali. Ngo imidlalo kakhulu, ngisho PvP labelwe enkundleni ezikhethekile lapho abadlali bancintisane, ebabonisa amakhono abo futhi abazibonakalisa ukuphakama kunezilwane abanye. Ngo "Maynkraft" akukho ezifana kokuhlukana yokululama elincane kakhulu. Kodwa akusho ukuthi lokhu ukushintsha yokuthi omunye umsebenzisi ungakwazi ngasiphi isikhathi ukuhlasela wena uzokubulala. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukwazi ukuthi ukukhubaza PvP esifundeni "Maynkraft", njengoba kungaba insindiso yakho.
Ukuba Wedwa esifundeni
Ngeshwa, ukukhubaza amandla ukuhlasela isidlali eyodwa kuya kwenye, isimiso, alikho - ungakwazi kuphela nomkhawulo lo msebenzi kusayithi lakho. Kodwa ngenxa yalokhu odinga ukukwazi izifunda kanjani Privat, bese ungakwazi kakade ufunde indlela ukukhubaza PvP esifundeni "Maynkraft". Lutho kuyinkimbinkimbi ngakho - udinga nje imbazo yokhuni uyofuna uqaphele amaphuzu amabili okuphambene a parallelogram, okuzoba indawo yakho. Kukhona imikhawulo ethile yezingcingo izilinganiso, kodwa manje akusho idlala indima enkulu. Kubalulekile ukuthi uphawu esifundeni sakho futhi manje uqale ukufunda indlela uvala bese uvula kokubili PvP. Ngo "Maynkraft" Konke lokhu kwenziwa ngosizo amaqembu akhethekile, okuzoxoxwa kamuva.
Uma endaweni isinikeziwe, kusho ukuthi iseva efakwe i-plugin elikuvumela ukuba uhlele emhlabeni. Phela, imbazo kumaka owakwenza, esibizwa ngokuthi i-flag, futhi ichaze imingcele ethize ufuna ukushintsha. Usimisa amafulegi amabili, okuyinto ndawonye ukudlulisela ukwaziswa esifundeni Baphawula ukuthi kungesakho. Yileyo ndlela esizwa ngayo ufunde nendlela ukukhubaza PvP. "Maynkraft" 1 5 2, kanye izinguqulo kamuva of the game, isho elula futhi ezingabizi ukusebenzisa imiyalo, ngakho uyokwazi ukwenza umsebenzi walo ngaphandle nobunzima. It uhlala kuphela ukubhekana nalokho kuyadingeka ukuze ufake umyalo ukukhubaza amandla ukuhlasela nabanye abadlali uma ungathandi khona. Phela, kukhona PvP iseva ekhethekile "Maynkraft" lapho abadlali ukuncintisana emelene nezinye ezizayo. Futhi abantu abavamile ukuba kungenzeka iseva usafuna ukuthula.
Ukunika amandla futhi ethikameza PvP
Awunayo ukuba ngekhanda imiyalo emibili ehlukene ukusebenzisa kumbe ukucima PvP, ngoba ingxenye enkulu wabo okufanayo. Ebhokisini umbhalo, thayipha kokulalela umyalo izindandatho ifulege, ngemva kwalokho-ke kuyadingeka ukubhala igama esifundeni sakho - inquma ukuthi ifulege isethwe lapha uyokwenza sendawo ethile. Khona-ke udinga ukwengeza PVP, kodwa ke unezinketho ezimbili. Uma ubhala uvumele, endaweni yakho bazovunyelwa ukuhlasela nabanye abadlali. Uma unquma ukubhala aphike, kungenzeka PvP ke iyoqedwa khona ngokuphelele. Kuleso simo, uma othile ezama ukuhlasela wena noma omunye umuntu endaweni yangakini, ngeke siphumelele. Ngakho, edolobheni lakho liye laba yindawo ethule, uvikelekile ekuhlaseleni nabanye abadlali.
Le nguqulo labadlali abaningi "Maynkrafta" unethuba ukubiza kuye omunye umdlali, futhi kweso teleport endaweni yakini. Kodwa-ke kufanele njalo kube phezu uqaphile, ngoba ungakwazi ngephutha ukuthuthela griefers yakhe noma ezinye bangaphandle. Ngu griefers ukuvikela yangasese, okuyinto ayikuvumeli ukubhubhisa emabhuloki bese kusuka abalandeli PvP - kuvinjelwe ukuhlaselwa kwamanye izinhlamvu. Ungakhohlwa mayelana nazo zonke izinyathelo zokuphepha, indlela kuphela uzokwazi ukulondoloza impahla yabo, kanye nokuphila bobuntu bakhe, okuyinto ngokuphephile evikelwe at indawo zaprivachennoy.
Abacibishelayo for PC ababuthakathaka: games
Indlela ukufaka isitambu kanye fashion ngaye
Imininingwane mayelana indlela yokwenza Iridium
322 - ukuthi kusho ukuthini "DotA"
Game WOW: indlela fly ku Draenor
"Fibos" (amanzi ukuhlunga): ukubuyekezwa, Ukucaciswa
Thatha yenkomo sirloin! Kuyini lokhu? Delicious, inyama eqotho futhi ithenda!
Limak Limra Ihhotela kuyona 5 *: incazelo, izithombe. Ihhotela "Limak Limra" (Kemer / Turkey): abahambi Izibuyekezo
Linked immunosorbent Assay: isicelo netimphawu
Indlela ukunquma usayizi zangaphansi
Gagra, ukuphumula. Izibuyekezo mayelana Abkhazia
Ukulungiselela eziyinkimbinkimbi "Kanefron" - imiyalelo, isakhiwo kanye isenzo
Ukudla okunomsoco: imenyu ngesonto
Kiev isekisi umlando njengoba ukuzijabulisa emangalisayo enhloko-dolobha ye-Ukraine
Indlela Yokwenza Dembo Rubinstein: self-ucwaningo